होसियार ! यी ५ खानाको बढी सेवनले निम्त्याउँछ क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग – Krazy NepaL
March 7, 2021 2044
तारेको खानेकुरा बढी खाइयो भने शरीरमा एक्रिलामाइड नामक तत्वको सञ्चय बढ्छ, जसले पुरुषमा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता कम गरिदिनेदेखि क्यान्सर लगाउनेसम्मको जोखिम बढाउँछ । उसिनेको खानामा एक्रिलामाइड तत्व कम हुन्छ । त्यसैले उसिनेको परिकार लाभदायक हुन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
रक्सीको लत लागेको छ भने दुई पेगभन्दा बढ्ता नखाने गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । बढी रक्सी खाने गर्नाले मुख, पाठेघर र स्तनसम्बन्धी क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुन्छ । त्यसै चुरोट खाने मानीसलाई फोक्सोमा क्यान्सर हुने सम्भावना बढि हुन्छ ।
Prevथाहा छ ? महिलाले पुरुषमा खोज्छन् यी ५ कुरा
Nextहे दैव ! अन्त्यमा केही सीप लागेन ! भर्खरै निभे कन्चन (हेर्नुस् भिडियो)
यी दुई राशि भएकी युवतीसँग विवाह गर्ने पुरुष हुन्छन् अत्यन्तै भाग्यमानी
राती सुत्दा कपाल बाँधेर सुत्ने की खोलेर ? यस्तो छ सही तरिका !